ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဝရိန်ဆော်ခြင်းမှ ထွက်လာသော ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် (အင်္ဂလိပ်: Ultraviolet) ဆိုသည်မှာ မြင်နိုင်သော ခရမ်းရောင်ခြည်ထက် လှိုင်းတိုသော မမြင်နိုင်သည့် ရောင်ခြည်မျိုးဖြစ်သည်။ မိကျောင်းများနှင့် ငှက်ငယ်များကဲ့သို့ တိရစ္ဆာန် အများစုကမူ မြင်တွေ့နိုင်ပေသည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်ဟု ခေါ်ရခြင်းမှာ လူတို့မြင်နိုင်သော ခရမ်းရောင်ထက် ကြိမ်နှုန်းနှင့် လှိုင်းအလျားတို့အနေဖြင့် သာလွန်နေသောကြောင့် ဖြစ်သည်။ ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် ခေါ် အာထရာဗွိုင်းအိုရ်လက် ultraviolet ကို အင်္ဂလိပ်လို အတိုကောက်အားဖြင့် ယူဗွီ UV ဟု ခေါ်ပြီး နည်းပညာ နယ်ပယ်တွင်သာ ခေါ်ဆိုမှုများသည်။
အိပ်စရေးရောင်ခြည် စတင်ဖြစ်ပေါ်သည့် ရောင်ခြည်ထိလုနည်းပါး ကူးစပ်သွားသည်။ နေရောင်တွင် သဘာဝအားဖြင့် ပါဝင်၍ ပြဒါးမီးလုံး တစ်မျိုးဖြင့်လည်း ဖန်တီးထုတ်ယူနိုင်သည်။ မြေပြင်သို့ မရောက်မီ ထိုရောင်ခြည်ကို အိုဇုန်းလွှာက စုပ်ယူလိုက်သည်။ ထိုရောင်ခြည် အနည်းငယ်သည် အကျိုးပြုသော်လည်း များလွန်းလျှင် အန္တရာယ်ဖြစ်စေသည်။ ထိုရောင်ခြည်သည် ပိုးမွှားကို သေစေနိုင်စွမ်း ရှိသည်။ 
၃၈၀ နာနိုမီတာရှိ အားပျော့သော ခရမ်းလွန် ရောင်ခြည်သည် အိမ်သုံးပစ္စည်းအချို့ကို လင်းထိန်စေသည်။
ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်သည် ကျန်းမာရေးကို ထိခိုက်စေနိုင်သည်။ ဥပမာ − နေရောင်ခြည်တွင် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ ပါဝင်ပြီး ၎င်းတို့က နေလောင်ခြင်းကို ဖြစ်ပေါ်စေကာ ကင်ဆာ ဖြစ်ပွားစေနိုင်သည် အထိဖြစ်တတ်သည်။ အိပ်စရေးစက်မှ ဖြာထွက်နိုင်သော လုပ်ငန်းသုံး ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များသည်လည်း ကင်ဆာဖြစ်စေနိုင်ပြီး လူတို့၏ မျိုးပွားနှုန်းကို ကျဆင်းစေသည်။
ကမ္ဘာ့လေထု အမြင့်ပိုင်းရှိ အိုဇုန်းလွှာက ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည် အများအပြားကို စုပ်ယူထားသည်။ လူတို့ကြောင့် အများဆုံး ပျက်စီးသွားသော အမြင့်ပိုင်းရှိ အိုဇုန်းလွှာ ပျက်စီးမှုသည် ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်များ ကမ္ဘာမြေသို့ ကျလာခြင်းကို မတားဆီးနိုင်တော့ပေ။ ထို့ကြောင့် အရေပြား ကင်ဆာများ ပိုမိုဖြစ်ပွားလာသည်။
↑ Haigh, Joanna D. (2007). "The Sun and the Earth's Climate: Absorption of solar spectral radiation by the atmosphere". Living Reviews in Solar Physics4(2). Retrieved on July 12, 2014.
↑ Reference Solar Spectral Irradiance: Air Mass 1.5။ 2009-11-12 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ခရမ်းလွန်ရောင်ခြည်&oldid=375927" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၂ ဇူလိုင် ၂၀၁၇၊ ၁၄:၄၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။